Fahafatesana tsy namela nahazo :: Zazalahikely nifandimbiasan’ny afo sy ny rano novonoina • AoRaha
Fahafatesana tsy namela nahazo Zazalahikely nifandimbiasan’ny afo sy ny rano novonoina
Nampihetsi-po ny olona teny ankasina sy ny manodidina ny fahenoana ny fahafatesan’ilay zazalahy kely, randrianasolo mandresy, telo taona, latsaka tao anaty rano izy, tamin’ny sabotsy 9 marsa 2019, tokony tamin’ny 12 ora antoandro. Nidongy hanara-dia ny zokiny vavy, 9 taona, ho eny amin’ny raibeny ity zaza , tamin’io fotoana io. Vao tera-bao efa-bolana ny reniny izay somary saro-piterahana ka tsy afa-mihetsika firy eo am-pandriana. Tanàna voahodidina rano feno tsikafokafona no misy ny rainibeny. Novinavinain’ny fianakaviana haka baolina miloko mavo latsaka tao anaty rano no antony nahatonga ny loza.
Tsy ampoizina. Avy nanotra olona tsy salama teny 67 Ha sady niantsena ny sakafo antoandro, Rakotoarivony na i Vony, raiben-dRandrianasolo Mandresy, ny sabotsy maraina. Ankoatra ny fanorana dia mamboly sy miompy no foto-piveloman’i Vony hamelomany ny vady aman-janany. Fahazarany ny mivily mamangy ny zanak’anabaviny, ray aman-drenin’i Mandresy Kely. Nitomany hanaraka i Mandresy Kely tamin’ny nandalovany teny. “Tsy nety nitondra azy aho satria zaza tia milalao rano izy kanefa ny manodidina ny tanànanay rano avokoa. Tsy ho vitako ihany koa ny hanara-maso azy. Izy no ho zandriny indrindra amin’ny zafikeliko hilalao eo an-tanàna ka tsy ho efako”, hoy Rakotoarivony.
Hatramin’ny nahaterahan’ny reniny, tsy mbola nandeha na nisy nitondra nankeny amin’ny raibeny i Mandresy Kely. Miisa telo ambin’ny folo ny zanaka sy ny zafikelin-dRakotoarivony no miara-milalao matetika eo an-tokontany sy manjono sahona ka mahatamana ireo ankizy.
Nisy nitondra ihany anefa ity zaza ka vatana mangatsiaka no nakarina avy tao anaty rano, izay efa natahoran-draibeny ka tsy nitondrany azy. Herintaona talohan’io dia efa saika matin’ny afo, noho ny hain-trano i Mandresy Kely. Ny zokiny no nindaosin’ny fahafatesana tamin’izany, herinandro taorian’ny nahakila ny tranon’izy ireo.
Volana febroary 2018, may tamin’ny fomba mampiahiahy ny trano nipetrahan-dry Mandresy Kely. Efa saika tsy tafavoaka velona izy tamin’izany fotoana raha tsy voavonjin-dRakotoarivony, raibeny. “Tsy nahare izay ambonin’ny tany ireo ray aman-dreniny sy ny iray tampo aminy. Ny andro rahateo alina. Ny tompon-trano tao ambony no nahare maimbo raikona sy ny mponina manodidina. Nifarimbona namono ny afo ny fokonolona. Nirohotra nivoaka ny trano izy efa-mianaka fa i Mandresy Kely no tavela tao an-trano. Niezaka niditra ny trano aho na dia efa niredareda be aza ny afo. May avokoa ny vatako iray manontolo nandritra ny fisarihana azy teo am-pandriana. Tsy mbola anjarany ny ho faty tamin’izany”, hoy Rakotoarivony na i Vony.
Herinandro taorian’io firehetan’ny trano io, narary nentina tany amin’ny mpitsabo ny zokin’i Mandresy, lahimatoa. “Teny an-dalana hody no tonga ny antambo. Ohatran’ny tsakoahana izany fotsiny izy dia tapitra ny ainy”, hoy hatrany i Vony.
Antso tsy nisy namaly
Fotoana fohy nahatongavany tao an-tranony, Rakotoarivony, raiben’i Mandresy kely, indro ny zokiny vavy sady vavy tokana sy Mandresy Kely no nigadona teo am-bara­varana. “Izaho mahandro sakafo tao an-dakozia ary ny dadabeny variana mijery fahitalavitra no niditra ny trano izy dahy. Nampitondrain’ny reniny ny lamba maloton’i Mandresy izy ireo fa hoe hosasana ety aminay satria tsy mbola afaka manasa lamba ny reniny”, hoy Razaiarisoa Lilie, reniben’i Mandresy Kely.
Tonga ny fotoana fisakafoanana. Nahatratra dimy ambin’ny folo no isan’ny olona hisakafo, tamin’io sabotsy antoandro io. Antsoina tsirairay ny ankizy mibata ny variny sady tondrahana laoka. Voatonona ny anaran’ny zokin’i Mandresy Kely, izay mbola tany an-tokotany izy dahy, tamin’io. “Notarihiny hanaraka azy i Mandresy fa nitokona tsy nety nihetsika teo ambonin’ilay vato fanasanay tongotra”, hoy hatrany i Lilie.
Nitohy ny fizarana ny vary sy laoka. Voatonona ny anaran’i Mandresy Kely fa tsy nisy namaly no tsy nisy niditra ny trano. Nikoropaka nivoaka ny trano ny renibeny. Nitady nijery eran’ny tokotany sady niantsoantso. “Nanontaniana ny zokiny hoe taiza ny toerana nahitanao azy farany. Ny zanako lahimatoa no avy hatrany dia nisava tandrifin’ilay vato fanasana tongotra”, hoy hatrany ity renim-pianakaviana.
Maso nihiratra kely
Indro efa tsy mahatsiaro tena no nakarina avy tao anaty rano i Mandresy Kely. Raikitra ny fameloman’aina. Natao ny toho-bava sy ny fanorana ny tratrany. “Saika laninay mianaka ny rihi-potaka tao anatiny iray manontolo ankoatra ny rano. Nihiratra kely ny masony ary nisento tokana izy. Nifaly tapany ihany izahay hoe velona ity fa handao hanatona mpitsabo haingana”, hoy Rakotoarivony, raibeny.
Nihazakazahana ny mpitsabo tsy miankina, manodidina an’Ankasina ka hatreny amin’ny 67 Ha. “Nasain’ilay mpitsabo teny 67 Ha nody izahay fa efa tsy namana intsony ny zafikeliko. Tsentsin’ny fotaka ny lalan-drivotra fa ny rano efa tsy misy intsony. Izay no anisan’ny tsy nahatana ny ainy raha ny filazan’ilay mpitsabo. Vao tonga tato an-trano aho, ireo fitaratra amin’ny varavarankely ireo no tapitra novakivakiako nanalako ny foko noho ny alaheloko an-janako. Ary ny mampanontany tena ahy dia vao tamin’ny herintaona toy izao no maty ny zokiny. Izao indray dia maty i Mandresy. Asa, inona indray no loza ho avy ?”, hoy hatrany i Vony sady nihivingivin-doha.
Raha tsy nanankim-po tamin’Andriamanitra izahay, mety tsy ho zaka izao manjo anay izao, hoy Rakotoarivony mivady teo am-pamaranana. Nalevina ny alahady 10 marsa 2019, teny Ambohidahy Mahitsy, ny razana.
Fahafatesana tampoka :: Zandary iray maty nilatsaham-potaka